दुनियाँको पहिलो जहाज रा’वणले उ’डाएको श्रीलंकाको दा’बी
रोचक दुनियाँको पहिलो जहाज रा’वणले उ’डाएको श्रीलंकाको दा’बी
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: भगवान रामको जन्मस्थान अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी गरेसँगै राम जन्मभूमिका विषयमा नेपाल र भारतमा गर’मागरम बहस चलिरहेको छ ।
चर्का’चर्कीको यो माहोलमा रामायणको अर्को पात्र राव’णको जन्मभूमि श्रीलंका समेत थपिएको छ ।विश्वमा पहिलो पटक राइट दाजुभाइले विमान तयार गरेर उडाएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।
तर श्रीलंकाले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा पहिले विमान उडाउने व्यक्ति रावण भएको दाबी पेस गरेको छ । श्रीलंका सरकारले आजभन्दा ५ हजार वर्ष पहिले रावणले पहिलोपटक विमान उडाएको दाबी गरेको हो ।
यस सम्बन्धमा एक विज्ञापन सूचना जारी गर्दै श्रीलंका सरकारले रावणसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु शेयर गर्न आम सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ । श्रीलंकाको पर्यटन तथा उड्ययन मन्त्रालयले उक्त विज्ञापनलाई विभिन्न पत्रिकाहरुमा प्रकाशित गरेको छ ।
सिंहाली भाषामा छापिएका ती विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘हामी रावणसँग सम्बन्धित दाबीहरुका विषयमा गहन अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ र यो प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ कि दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो विमान रावणले नै उडाएका थियो ।’
श्रीलंकाको नागरिक उड्ययन प्राधिकारणका अधिकारीले दुनियाँको पहिलो विमान रावणले नै उडाएको र त्यसलाई प्रमाणित गर्न आफुहरुसँग धेरै तथ्यहरु रहेकाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा त्यसलाई प्रमाणित गरिछाड्ने बताएका छन् । रामायणमा खलपात्रको रुपमा रहेको रावणलाई श्रीलंकामा निकै श्रद्धा गरिन्छ ।
श्रीलंकाले आफ्नो पहिलो स्याटेलाइटको नाम समेत रावण-१ राखेको थियो । श्रीलंकाली शोधकर्ताहरुले त्यहाँ ५० वटा यस्ता ठाउँहरु पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् जसको सिधा सम्बन्ध रामायणसँग रहेको छ । त्यसमध्ये एउटा गुफा समेत रहेको छ जहाँ रावणको शव राखिएको दाबी गरिएको छ । उक्त गुफा श्रीलंकाको रेगला जंगलमा रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्। दु’बाेकाे यस्ताे फा’इदा दि’नमा कति पट’क र कसरी खा’ने
दुबो हामी सबैको लागी परिचित झार हो । यसलाई नदेख्ने सायदै कोही होलान । यो हाम्रो घर वरिपरिको आगनमा उम्रिरहेको हुन्छ । हिन्दु धर्ममा यसलाई विभिन्न पाठपुजा गर्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
त्यसैले यसको महत्व छुट्टै छ । यसलाई आयुर्वेदमा औषधी बनाउनको लागी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । दुबो हाम्रो स्वास्थ्यको लागी निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । यसको महत्वको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा नभएकाले यसलाई हामी एउटा घाँसको रुपमा मात्र लिने गर्छौं । यदि हामीलाई यसको उपयोगको बारेमा थाहा हुने हो भने यो हाम्रा लागी विभिन्न रो’गको औष’धि हुन्छ । दुबोले स्वा’स्थ्यमा पुर्याउने फाइदाहरु यस्ता छन्:
१) दुबोको रसमा पोषक तत्व हुने भएकाले यो स्वा’स्थ्यका लागि त्यसैपनि फाइदाजक छ ।
२) क’ब्जियत, क’लेजोको रोग, यौ’नरो’गमा दुबो अत्यान्तै लाभदायक हुनछ ।
३) श’रीरको विकार हटाउँछ ।
४) यसले र’गतलाई शुद्धिकरण गर्न सघाउँछ ।
५) पि’साबमा खराबी छ भने दुबोको रस फाइदाजनक हुन्छ ।
६) ना’कको समस्या पनि दुबो लाभदायक हुन्छ ।
७) सामान्य अवस्था वान्ता भए, नाथ्री फुटे, छाती पोले, जिउ चिलाए, शरीरको कुनै भाग सुन्निएमा दुबोको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
शरीरमा आवश्यक प्रोटिनको मात्रा पुगे/नपुगेको यसरी थाहा पाउनुहोस्, जानी राखौँ: प्रोटिन शरीरलाई नभई नहुने पोषक तत्व हो । अङ्ग, मां’सपेशी, स्नायु प्रणाली तथा प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै हदसम्म प्रोटिनमा भर पर्छन् । मांसपेशीको विकास तथा आन्तरिक स्व’स्थताले शरीरको ढाँचा तयार पार्छ र यो सब प्रोटिनमा निर्भर रहन्छ ।
त्यसैले अत्यावश्यक प्रोटिनको मात्रा शरीरलाई पु’गेको छ वा छैन थाहा पाउनु जरुरी छ । प्रोटिनको अभावमा तपाइकाे शारीरिक विकास राम्रोसँग हुँदैन । प्रोटिन अभाव भएको सङ्केत थाहा पाउन सके त्यसको समाधानको उपाय अपनाउन सकिन्छ । प्रोटिनको मात्रा शरीरलाई पु’गेको छ वा छैन थाहा पाउनु: शरीरलाई स्व’स्थ राख्न फ्याट, सो’डियम, पो’टासियम, का’र्बोहाड्रेट, सुगर, भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन र प्रोटिनको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ ।
यी सबैको सन्तुलनले नै शरीरलाई स्वस्थ राख्दछ । यी सबैमध्ये हड्डी, मां’सपेशी र मु’टुको स्वा’स्थ्यका लागि प्रोटिन अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हो । हरेक पोषक तत्त्वझैं शरीरलाई प्रोटिनको पनि निश्चित मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर, प्रोटिन धेरै हुनु अथवा कम हुनु दुवै स्वा’स्थ्यको लागि हानिकारक छ ।विशेषगरी यसको कमीले मानिसको शरीर कमजोर हुनुका साथै अन्य समस्या पनि देखा पर्न सक्छ । यो पर्याप्त मात्रामा नहुनाले मां’सपेशी र हड्डीका साथै मु’टुसम्बन्धी अुनेक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसको कमीले शरीरमा यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् :
तौल अचानक कम हुँदै जानुस्: सामान्यतया मानिसको तौल घटबढ भइरहन्छ । तर, यदि शरीरमा प्रोटिनको मात्रा कम छ भने शरीरलाई आवश्यक प्रोटिन यसले मांसपेशीलाई टुक्राएर मांसपेशीबाट लिन थाल्छ र अचानक तौलमा तीव्र गतिमा कमी आउँछ । हे’मोग्लोबिनको कमी: हेमोग्लोबिन अर्थात् सेतो र’क्तकोषिका प्रोटिनबाट नै बन्ने भएकाले शरीरमा प्रोटिनको कमी भएमा हेमोग्लोबिनमा कमी आउँछ र यसले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउँछ ।
कपाल कमजोर हुनु: तौल कम हुनुका साथै प्रोटिनको कमीले कपाल पनि कमजोर हुँदै जान्छ । कपाल पलाउन पनि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले प्रोटिनको कमीले कपाल कमजोर हुने, कपालमा हाँगा पलाउने, झर्ने जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छ । त्यस्तै, नङ कमजोर हुनुले पनि शरीरमा प्रोटिनको कमी भएको सङ्केत गर्छ ।
श’रीरमा एडेमा(पानी फोका) हुनु: प्रोटिनको कमीले एडेमा अर्थात् शरीरको केही भागमा पानी फोका देखिन सक्छ । प्रोटिनले शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलित राख्ने भएकाले यसको कमी भएमा शरीरमा पानीको मात्रा असन्तुलित हुन गई यस्ता समस्या देखा पर्छन् । विशेषतः हातपाउमा यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।
अन्य समस्या: छाला फुस्रो हुनु अथवा छालामा धर्सा देखिनु पनि प्रोटिनको कमीका कारण हुन सक्छ । शरीर कमजोर भएको महसूस हुनु, निद्रा धेरै लाग्नु, घाउ लागेको छ भने ठीक हुन धेरै समय लाग्नु बारम्बार भोक लाग्नु, मांसपेशी र जोर्नी दुखिरहनु, शरीरमा ऊर्जाको कमी हुनु, टाउको दुख्नु, रिङ्गटा लाग्नु, थकानको महसूस हुनु आदि प्रोटिनको कमीले हुने समस्याहरू हुन् । अहिले यस्ता समस्या अधिकांश व्यक्तिमा देखिने गरेको छ ।
प्रोटिनको कमीले सामान्यदेखि गम्भीर समस्या पनि देखा पर्न सक्छ । सन्तुलित आहारको कमी, प्रोटिनको स्रोत राम्ररी थाहा नहुनु, नियमित एकै प्रकारको आहार गर्नु आदि कारणले शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन गई माथि उल्लिखित समस्याहरू शरीरमा देखिन सक्छन् । त्यसैले शरीरमा प्रोटिनको मात्रालाई सन्तुलित राखिराख्नु आवश्यक छ । कतिपय मानिस प्रोटिनको आवश्यकता खेलाडी र बडीबिल्डरलाई मात्र हुन्छ भन्ने सोच्छन् ।
यो अत्यन्त गलत हो । हरेक व्यक्तिलाई प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । प्रोटिन माछा, मासु र अण्डामा प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले ननभेज खानेलाई यसको समस्या कम भए पनि शाकाहारी मानिसलाई भने माछामासुबाहेक प्रोटिन पाइने आहारको जानकारी कम हुने गरेकाले प्रोटिनको कमीले यस्तो समस्या धेरै देखिने गरेको छ । दूध, चिज, पनिर, टोफु, नौनी, गेडागुडी, दाल, सोयाबिन, फर्सी–काँक्रो आदिको बियाँ, गहुँको रोटी, पालुङ्गोको साग, जौको रोटी र चिउरा आदि प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइने शाकाहारी आहार हुन् ।
प्रोटिनको कमी हुँदा के हुन्छ ? पातलो रौँ – शरीरको रौँ’को मोटाई वंशाणुगत हुने भए पनि प्रोटिनको अभावमा रौँ पातलो हुन्छ । शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन जाँदा शरीरले रक्षात्मक उपाय अपनाएर रौँ, नङलाई प्रोटिन आपूर्ति गर्न छाड्छ । यसैकारणले नङ र रौँको स्वास्थ्य बिग्रन्छ । यसैले रौँ र नङको स्वा’स्थ्य अवस्थाले शरीरमा प्रोटिनको मात्रा दर्साउँछ । आँखा सुन्निने: प्रोटिनको अभाव भएको अवस्थामा र’गतमा प्लाज्मा प्रोटिन कमी हुन्छ ।
क’लेजोले पर्याप्त मात्रामा फलाम तत्व सञ्चय गर्न नसक्दा यसरी प्लाज्मा प्रोटिन कम हुने हो । फलाम तत्वको कमी भएर हेमोग्लोबिनको उत्पादन घट्छ र रक्तअल्पता भएर आँखा सुन्निन्छ । थकान: प्रोटिन कम हुँदा शरीर थकित हुन्छ किनभने शरीरले पर्याप्त ऊर्जा पाउँदैन । शरीरमा चिनीको मात्रा प्रोटिनको सहयोगमा व्यवस्थित हुन्छ । यसैले प्रोटिनको पर्याप्त मात्रा भएन भने दिमागले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र थकान महसुस हुन्छ । मांसपेशी क्षय हुनुले प्रोटिनको कमी देखाउँछ ।
प्रोटिनको अभाव भएमा मांसपेशीको आकार कम हुन थाल्छ । भोक लाग्नु प्रोटिनको आभावमा भोक धेरै लाग्छ । विसन्चो हुनु: स्वस्थ मानिसमा पनि प्रोटिनको आभाव भएको अवस्थामा बारम्बार बिरामी पर्न थाल्छ ।
शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन आवश्यक पर्छ । रातो र’क्तकोष, सोतो रक्तकोष र एन्टिबडीको आधार प्रोटिन हो । यी सबै पक्षले मिलेर शरीरमा रोगाणु नाश गर्ने काम गर्छन् । झाडापखाला: झाडापखाला लाग्नु भनेको पाचन प्रणाली बिग्रनु हो । यस अवस्थामा आन्द्राले पोषक तत्व राम्रोसँग अवशोषित गर्न सकेको हुँदैन र शरीरमा प्रोटिनको कमी हुनजान्छ ।
“जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न नसके स्वरुप एक सेयर अबश्य गर्नु होला” जिन्दगीमा एकपटक पुग्नै पर्ने मन्दिर
हामी धेरैले प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको सुनेका छैनाैँ होला, तर कतिपय भने यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत भएका पनि हुन सक्छाैँ ।यदी प्लेनमा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चा कुन देशको नागरिक हुन्छन् त ?